Alahady 4 Desambra 2016, 10h24 (UTC+3)
lahatsoratra 82 814 amin’ny teny malagasy
Ny "lamba landy" kosa dia ampiasaina hilazana ireo lamba vita amin'ny landy saingy hitafian'ny velona. (tohiny...)
Nanoloany izany, dia nitsidika tao amin’ny hopitaly HJRA ireo niharam-boina ny filoha ‪Hery ‎Rajaonarimampianina‬ alina, nankahery ireo naratra sy naneho ny fiaraha-miory tamin’ireo fianakaviana namoy havana.
Baiko hentitra no nomeny ny tompon’andraikitra rehetra mba hanamafy ny fampiharana ny lalàna sy ny fitsipiky ny fifamoivozana, hampihatra tsy misy indrafo ny famaizana amin’izay mihoa-pefy, ary hanaramaso akaiky ny fanomezana alàlana hamily fiara, indrindra eo amin’ny sehatry ny fitateram-bahoaka.
Niantso ireo mpitatitra izy mba ho matihanina ny mpamily ampiasaina satria ain’olona no lalaovin’ireo manao kitoatoa amin’ny asany. Asiana sampan’ny BANCO koa, hoy ny filoha, eny amin’ireo toby fitsirihana ara-teknika mba tsy ho nohon’ny kolikoly no ahazoana alàlana, kanefa hitera-doza satria tsy tomombana ny fiara.
04 desambra Ny 04 desambra 1973 no teraka i Cynthia SARDOU, antsoina koa hoe Li Lou, frantsay, mpanao gazety ary mpanoratra tantara foronina. Nandalo fotoan-tsarotra ara-pianakaviana tokoa tamin'ny fahazazany, ary noho izany dia nilaza ankitsirano tao anatin'ny tantara nosoratany voalohany fa tsy iriny ny hanononana an'i Michel SARDOU, ilay mpihira malaza ho rainy. Ny reniny moa dia Françoise PETTRE